Uchitha iintsuku ezingama-83 nge-imeyile | Martech Zone
NgoLwesine, Julayi 3, 2014 NgoLwesihlanu, Julayi 4, 2014 UKelsey Cox
Umthengisi ophakathi uloga ngaphezulu kweeyure ezingama-2,000 39 ngonyaka kunxibelelwano lweshishini, ubukhulu becala kwimisebenzi ethile (28%) kunye nokufunda / ukuphendula ii-imeyile (72%). Ngelixa kubonakala ngathi imithombo yeendaba zentlalo iba yeyona ndlela ithandwayo kunxibelelwano, njengoko iinkampani ezingama-87% ngoku zisebenzisa imithombo yeendaba zentlalo ngandlela thile, i-imeyile iseseyona nto iphambili phakathi kwamashishini kwihlabathi liphela. NgokweNgxelo ye-McKinsey Global Institute, ii-imeyile ezizibhiliyoni ezingama-12 ziyenziwa yonke imihla. KumaMelika aneminyaka eli-94 nangaphezulu, iipesenti ezingama-58 zisebenzisa i-imeyile yazo rhoqo, iipesenti ezingama-XNUMX zazo zijonga iibhokisi zebhokisi yazo kwinto yokuqala ekuseni.
I-imeyile ibetha onke amanye amajelo entengiso kunye ne-ROI ephindwe kabini, $ 40.56 kuyo yonke i- $ 1 echithwe kwintengiso ye-imeyile. Kuba unxibelelwano nge-imeyile alubonisi zimpawu zokucotha, amashishini akrelekrele ayalisebenzisa eli qonga. ICirrus Insight inika iingcebiso kuye nabani na ofuna ukuvala umsantsa ophakathi kweGmail kunye neSalesforce kwi-ebook yabo yasimahla Inqanaba elilandelayo lokuDityaniswa kweSoftware.
tags: emailIbhokisi lemiyalezokwi-infographicUkuThengiswa kweMfono kunye neThebhulethiUkunika amandla ukuthengisa